rie! BRUSLS, drinkụọ! BORDEAUX gosipụtara Brussels chefs na ememme nke asatọ ya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » rie! BRUSLS, drinkụọ! BORDEAUX gosipụtara Brussels chefs na ememme nke asatọ ya
Akụkọ mkpakọrịta • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
18 min gụọ
Na 5, 6, 7 na 8 September 2019, rie! BRUSLS, drinkụọ! Ememme BORDEAUX ga-eweghara Brussels Park. Ihe karịrị 30 nke Brussels 'chefs na ndị omenkà ga-arụ ọrụ pụọ na ha stoves na ha mmapụta esi na-eje ozi elu ha mbinye aka efere ka ọha na eze. Banyere 50 Bordeaux winemakers na ndị ahịa ga-ewetara gị ọtụtụ mmanya nke na-egosipụta ịdị mfe, iche iche, ịdị mma na nnweta nke Bordeaux Wines, na-enye gị mmanya zuru oke iji soro nri gị na ohere ịchọpụta ihe ọhụụ.
Asatọ rie! BRUSLS, drinkụọ! ememme na-arịgo elu na ọrụ ya ma na-anabata karịa 30 nke Brussels 'chefs na ndị omenkà. Nke a bụ ohere magburu onwe ya ịchọpụta kpakpando nke ọnọdụ gastronomy nke Belgium na gburugburu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Brussels Park. N'afọ a, chiiz na Ogwe ọzara ga-agbakwunye ihe ndị ọzọ na nchịkọta nri nke ememme a.
Ihe dị ka ndị na-eme mmanya mmanya na ndị ahịa Bordeaux 40 ga-anọkwa na mmemme ahụ ma wetara gị Bordeaux Wines zuru oke (uhie, ọcha, rosés na crémants), nke ga-aga nke ọma na efere ndị siri nri ahụ kwadebere.
Ihe karịrị 30 nke Brussels 'chefs
Ndị ama ama ama ama ama ama na Brussels na-esonye n'egwuregwu ahụ, nke a pụtara na ị ga-enwekwu ọ toụ maka mmemme a. Ha ga na-enye ndị ọbịa akwụkwọ nri maka mbinye aka nke na-achịkọta njirimara nri ha.
Ndị siri nri n’oriri ahụ:
Oluchi Onweagba - Brinz'l
Laure Genonceaux ji mpako na-ekwusi ike ma gosipụta mgbọrọgwụ Mauritian ya na obere isi na Brinzelle, aubergine nke obodo Mauritius. Agbanyeghị, nri ya bụ nke French, ihe okike na ọkwa dị elu. Laure na - eme mmemme mpaghara site na mpaghara anyị. Mgbe ị na-eke efere ya, ọ na-elekwasị anya na ibute ihe ndị sitere n'okike na ịkwanyere ndị na-emepụta ya ùgwù.
Le Tournant dị n’ime obi Ixelles, na nsọtụ mpaghara Matonge. N'ebe ahụ, Denis Delcampe na-akwadebe nri ahịa ahịa mara mma, nke nri ụwa na-emetụta. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ na-ebugharị menu mmanya mmanya ya na mmanya na mmanya na-ebute ụzọ.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n’ime ụlọ oriri na ọ wonderfulụ wonderfulụ kachasị dị ebube n’obodo. Ebe ọ bụ na onye isi ala Californian bụ Alex Joseph weghaara kichin ebe ahụ, Rouge Tomate amalitela ịmịpụta ụdị ọgbara ọhụrụ dị iche iche nke na-emepe emepe oge niile. Alex meriri na Benelux 2015 San Pellegrino Young Chef mpi.
Karịa ihe ọ bụla, Racines bụ njem nri. Ọ na-ewe gị na njem na ezigbo, delicious na idyllic Italy. Italytali a nwere oke ngwaahịa na-enweghị njedebe. Chọpụta nke a Italy na abụọ ndị a siri nri 'ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, Racines na Petit Racines.
Yoth Ondara - Egbe klọb
Bistro a nwere ihe ịchọ mma na-ewu ewu mepere ụzọ ya na mpaghara Porte de Hal na 2015 wee wetara gị nri dị iche iche nke dị n'okirikiri nri, nke sitere na azụ azụ na ebuka na-adịgide adịgide. Kwa ụbọchị, onye isi nri Yoth Ondara, nke sitere na Thai, na-ewetara gị ụdị nri dị iche iche dị ọhụrụ na nke dị mfe na mmetụta ndị Eshia yana sọfụ sọfụ-turf, nyere gị ụdị nke mezze.
N'ịbụ onye dị n'isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndekọ PIAS, ụlọ oriri na ọteenụ internationalụ mba a dị ka nke ọzọ. Mgbe na-amị reinvented nri na Filipino mmetụta, Glen na Julie etinye a arọ mesiri ike na eke na-emepụta na tantalise gị uto buds.
Valerio Borriero– SAN Sablon talọ oriri na ọ .ụ .ụ
Onye isi Michelin-starred siri nri emeghewo ụlọ nri atọ na Brussels na Ghent n'okpuru aha San. Onye isi nri Valerio Borriero na-elekọta ụlọ oriri na ọlonụ Sabụ Sablon, na-ewetara gị nri pụrụ iche, dịka ị ga-atụ anya ya.
N'ịbụ nke dị n'ime ụlọ 1930s edepụtara, Alessio Sanchez na-ewetara gị nri Japanese "bistronomic", nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke ngwakọta sitere n'okike sitere na ngwaahịa ndị Peruvian na usoro nri nri ndị Japan.
La Truffe Noire anọwo na-atọ ndị hụrụ ezigbo nri ụtọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30, ya na ngwongwo ya bụ nke kachasị pụta ìhè. Ma ị na-enwe oji, ọcha ma ọ bụ nke okpomọkụ, truffles ndị Luigi Ciciriello jere ozi na ụlọ ọrụ a mara mma dị nso na la Cambre dị mma. Nri a, nke na-elekwasị anya na ọkaibe a, ike anwansi na ihe pụrụ iche, na-ekwe nkwa inye gị ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu na diamond gastronomic a na-ebute ụzọ.
Karen Torosyan - ụlọ oriri na ọ BOụ BOụ BOZAR
Inye achịcha dịka Pâté en croûte, pie, Pithivier na Coulibiac, ụlọ oriri na ọzarụ Boụ Bozar bụ ụwa nrọ na ezigbo njirimara nke njirimara Bozar. Ebe ihe nlere anya di na ebe nri nke ulo oriri na ebe nri a di ezigbo nri nke ndi Karen Torosyan kwadebere.
Ndị ọhụrụ ahụ:
Jean-Philippe Watteyne kpebiri idozi ụlọ nri ya na họtel Sofitel Brussels Europe site n'ọnwa Mee. N’ebe a, onye isi nri nke si Mons wetaara gị nri mara mma na brasserie ọhụrụ 1040. Ọ bụrụ na ị na-enwe ọmarịcha ụtọ, ị ga-akwụsị ebe a!
Enweghị ndị ahịa dị mma ebe a, naanị ndị Belgium, Brussels na ndị si mba dị iche iche nke na-amata ezigbo ekpomeekpo ma nwee mmasị ịme. Onye siri nri Cédric Callenaere na-eku ume ndụ ọhụụ n'ime nri nke ụlọ ọrụ a, yana ịtụnanya na nke kachasị, nri dị ụtọ!
Cédric Mosbeux - Fernand Obb - Nnọọ attọ
Fernand Obb - Delicatessen na-egosi onwe ya dịka "tebụl kichin a ma ama". Cédric Mosbeux, onye bi na Brussels, ewepụtala isi nri ndị Belgium na narị afọ nke 21. Ọ rigoro n'ihe ịma aka ahụ dịka o nwere ike ịnya isi na ọ meriri asọmpi mmeghe iji chọta croquette oporo kacha mma na Brussels.
Akwụkwọ ntuziaka Gault & Millau nke 2018 nyere Kenzo Nakata onyinye sitere na ụlọ oriri na ọ Gụ Gụ Gramm ihe nrite maka nwata kachasị mma nke afọ. N'ezie, ụlọ oriri na ọ thisụ thisụ a, nke dị na Rue de Flandre 86, na nri ya dị ụtọ emeela ka mmadụ niile na-ekwu okwu.
Na Gus, ị nwere ike ịchọpụta ngwakọta aghụghọ nke nka nke ị breụ mmanya na gastronomy. N'ime ebe obibi enyi na enyi, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ biya bekee, nke Aurélien Grodent mebere na saịtị ahụ. Nri nke Pierre Baeyens na Jonathan Delhière kwadebere, bụ ndị na-agbabu Bon Bon na Air du Temps n'otu n'otu, gụnyere efere bistro. Ga-akwụsịrịrị n'ụlọ nri a.
Mgbe ihe karịrị afọ iri na-atọ anyị ụtọ site na okpukpu abụọ Michelin-starred siri nri Sang Hoon Degeimbre (L'air du temps, SAN), Toshiro Fujii emeghewo ụlọ nri ya. N'ebe a, ị nwere ike ịnụ ụtọ nri okike nke na-elekwasị anya na mmalite Japanese ya n'ime ọnọdụ mara mma.
Nri Isabelle Arpin anaghị agbaso ihe ejiji, ejiji adịghịkwa ya mma. Agbanyeghị, n'otu oge ahụ, ọ dịkwa iche na gourmet dị ka o kwere mee. Onye isi nri na-arụ ọrụ dabere na ụkpụrụ nke edepụtaghị efere na menu ya, nke pụtara na ọ nwere ike ịmepụta ihe mgbe oge ruru ka isi nri.
KAMO wetara gị Japan kachasị mma na efere gị. Restaurantlọ oriri na ọ Thisụ Thisụ a nwere nri ndị Japan na ihe ndị ọ chọrọ na mbụ nke uche ya, ma na-ebute ụzọ na-ewetara gị mkpụrụ oge na nke elu. Na KAMO, ị ga-achọpụta Japan, nka ya na ọkaibe ya.
Simona El Harar - Kitchen 151
Dị na mpaghara Ixelles, na ole na ole, Kitchen 151 na-ebuga gị n'okporo ámá Brussels ruo na etiti ọwụwa anyanwụ na mpaghara ndịda nke Mediterranean. Ga-enwe ahụmịhe iri nri nke na-eme ka nri nri agwakọta nke oge a na ọdịbendị nri ọgaranya nke Middle East na Maghreb.
Ndị isi ala Kevin Lejeune na Virginie Essers nọ n'isi nke ụlọ oriri na ọ myụ myụ a na-akọ akụkọ ifo ma wetara gị nri na-atọ ụtọ na nke siri ike. La Canne en Ville anọgidewo na-ekwesị ntụkwasị obi na mpaghara ụlọ oriri na ọ etụ localụ mpaghara ya. Kwa ụtụtụ, onye siri nri na ndị otu ya na-aga ịmepụta ọhụụ ọhụụ, gourmet na menu ọkụ maka ụbọchị ahụ.
Na Les Brigittines, ị bụ ọbịa nke Dirk Myny, onye isi ya. Ga-anụ ụtọ nri anyasị gị na ụlọ ọrụ izizi ọhụụ nke ọfụma nke nwere nnukwu ekwú ọkụ. N'ebe a, Dirk Miny kwetara na ọ na-enye nri brasserie, mana nke a bụ nri oge a na-atọ ụtọ, nke na-elekwasị anya na ngwaahịa mpaghara ma na-abịa n'ụba n'ụba. N'ime nri gị niile, Dirk Miny ga-ekpughe ihe ụtọ nke otu obi na-esiwanye ike ma na-arịwanye elu mpaghara.
Ixelles bu ebe obibi Les Caves d’Alex, n’ime onodu di egwu ma tinyekwaa barel n’ime ulo nwere ezigbo ikuku. Agbanyeghị, karịa ihe niile, Les Caves d'Alex nke French ndị na-eme nri, ndị nwere anụ a zọpụtara dị ka ọpụrụiche ya, eguzobela aha ụlọ nri a na mpụga Brussels. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Thisụ a dị mfe n'anya ma na-atọ gị ụtọ!
Mgbe o guzobere ụlọ oriri na ọ goụ goụ mara mma na obere obere obodo nke Euzet-les-Bains, Karin Burton kpebiri ịhapụ ala nna ya ọ hụrụ n'anya nke ndịda iji bịa Belgium ma guzobe ebe ọhụrụ. Kaosiladị, ọ bịaghị ebe a na aka efu, ebe ọ kpọtara ya niile ụtọ Camargue na Provence. Oge ndịda na ndịda nwere mmetụta dị ukwuu na menu, yana aha ndị na-eme ka ị na-eche banyere anyanwụ. Banye n'ọnụ ụzọ Lou Ferri dị ka njem 1,000 kilomita na obere nke abụọ.
Tannour bu achicha sitere na Syria. Ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ oriri na ọ fastụ fastụ a na-eri ngwa ngwa nke dị na nkume tụbara site na ebe Flagey ka akpọrọ aha ya, ebe ị nwere ike ịlele onye siri nri, Georges Baghdi Sar, mee ya n'ihu gị ebe ahụ. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Thisụ a na-ewetara gị ezigbo ngwaahịa ma na-eburu gị njem dị egwu n'ime obere ọnụ.
Alang Wichaiphum - Nwa Ochie
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Asianụ Asia bụ Old Boy, nke dị na Ixelles, sitere na agụụ nke ndị guzobere ya maka ụtọ na ụtọ Asia. Onye siri nri Alang Wichaiphum na-ewetara gị nri ndị China na Thai, nke ga-atọ gị ụtọ gị na-enye ekele maka ihe ọhụụ na nke oge a na-eji eme ha.
Paul Delrez - La Guinguette ndị ọzọ
Mgbe ọ dị naanị afọ iri abụọ na asaa, Paul Delrez agbaala ụlọ nri abụọ na Brussels. La guinguette en ville na-adị ka obere ụlọ oriri na ọ timeụ timeụ na-adịghị agafe agafe ebe ị nwere ike ịkwụsị ma nwee ọmarịcha nri iri nri. Onye isi nri nwa agbọghọ na-akwadebe nri nke na-atụ aro okpu ya na ọdịnala bistro, yana nri gourmet na ọdịiche oge.
Chọta a zuru okè itule n'etiti ọdịnala na oge a, àgwà mepụtara, na kwesịrị ekwesị nri ụzọ na sizinin, Olivier Vanklemput na ya sous-siri nri na-akwadebe ma ahụkarị Brussels efere na ihe Ezi ntụziaka nke pụtara ìhè na-egosipụta offal.
Dessert tebụl na mmanya cheese
Ọtụtụ ndị na-eduga ndị na-eme achịcha achịcha ga na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji tinye ihe ndị na-emecha ememme ahụ. Ndị gị na ezé dị ụtọ ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ọzara na-atọ ụtọ ọnụ na euro 9. Ndị na-eme mmanya na ndị ahịa Bordeaux ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ banyere mmanya ga-aga nke ọma na ọzara gị.
Achịcha achịcha dị iche iche:
Nikolas Koulepis - Nwachukwu Nicolas Koulepis
Mgbe a gbasịrị kpakpando na Villa Lorraine na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ Bụ Bouchéry na Notos, Nikolas Koulepis emepere nso nso a patisserie nke Greek na Rue du Page. Walnuts, pistachios na cinnamon na-egosipụta nke ọma na achịcha ndị a na-arụ ọrụ ọkụ na ọkaibe, na isi nke achịcha bekee Viennese na-ejupụta na patisserie a mgbe niile.
“Aha na ihe ịga nke ọma nke Rui Garcia abụghị ihe mberede. N'ezie, onye isi Portuguese a bịara na Belgium yana ọkachamara na nzuzo banyere nri esi na obodo ya.
Kemgbe ọ mepere, Garcia patisserie abụrụla akara ama n'isi obodo anyị. N'ebe a, ị ga - ahụ abụghị naanị staple 'pastel de nata', kamakwa ọtụtụ achịcha achịcha dị na mpaghara Portuguese. ” Anaïs Gaudemer - Cokoa
Anaïs Gaudemer, bụ onye na-abụbu onye na-elekọta mbara igwe ma na-enwe ara maka achịcha dị iche iche kemgbe ọ dị obere, nọ n'azụ ụlọ ahịa achịcha a pụrụ iche. Cokoa sitere n’okike site na okike dika ihe ndabere maka imeputa aturu ohuru na ohuru ohuru, nke a na-agbadoro anya gburugburu oge na mkpali nke onye okike ha Anaïs Gaudemer. Bịa ma chọpụta ụdị ngwaahịa dị iche iche nke na-atọ ụtọ dịka ha na-acha.
Yasushi Sasaki, onye bụbu nwa akwụkwọ nke onye isi nri achịcha a ma ama Mahieu na Stockel na onye gosipụtara n'elu 4 nke Gault et Millau Chocolate na achịcha dị iche iche na 2015, na-ewetara gị ọgwụgwọ ndị sitere na Japanese sitere n'ike mmụọ nsọ nwere obere shuga. Nke a gourmet siri nri emepụta ebube flavors na juru ndị mmadụ na ya ọhụrụ spins na patisserie ochie.
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ịnụ ụtọ ụdị chiiz dị iche iche ejiri mmanya Bordeaux mara mma. Kedu ihe ị ga - eji nwee cheese na - acha anụnụ anụnụ nke nwere mmanya ụtọ? N'afọ a, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eduga cheesemakers ga-eri nri! BRUSLS, drinkụọ! BORDEAUX, na-enye ndị ọbịa ohere ịchọpụta ekpomeekpo ọhụrụ maka nhọrọ mbụ ha.
Ndị na-aesụ cheesemakers:
Julien Hazard - Julien Hazard onye enyemaka
Julien Hazard bụ onye enyere aka na cheesemaker na maturing ọkachamara na-enye chiiz n'ọtụtụ ebe nri nri na Brussels. Na-eri nri! BRUSLS, drinkụọ! BORDEAUX, o nwere ihe karịrị narị chiiz iche iche. Ọtụtụ n'ime ha ejirila nlezianya tozuo n'okirikiri ụlọ ahịa ya dị na Rue Vanderkindere.
Okpueze 2016 Onye Belgium Cheesemaker nke Afọ, Véronique Socié bụ nwanyị nke abụọ iji merie ihe nrite a na nke mbụ imepe mmanya cheese na isi obodo Belgium. Onye nnọchi anya a maka ọrụ aka ya na-emepụta chiiz ewu sitere na mpaghara Jura wee tinye tebụl d'hôte n'ụlọ ahịa ya, ebe ị ga-enwe ike ịchọpụta nhọrọ nke chiiz kachasị amasị ya.
Le Comptoir du Samson bụ ihe gbasara ezinụlọ. Sistersmụnne nwanyị abụọ ahụ, Hélène na Lara Milan, ndị nwere mmasị na mpaghara ndị Belgium, tinyere nwanne nna ha, Vincent Verleyen, onye meriri 2014 Belgian Cheesemaker of the Year, na-ewetara gị nhọrọ chiiz nke emere na mmiri ara ehi na Condroz na Namur site na iji usoro ọdịnala, nke a na-akpọ dị ka ngwaahịa ngwaahịa.
Etienne Boissy- Site Comptoir
Mgbe ọ rụsịrị ọrụ na ụlọ oriri na ọtaụtaụ nke gụnyere afọ 10 dị ka Prọfesọ nke Isiokwu na-atọ ụtọ na Bolọ Ọrụ Paul Bocuse, Etienne Boissy meriri ihe nrite maka "France's Best Cheesemaker" maka 2003-2004. Kemgbe ihe ịga nke ọma a, Etienne Boissy na-enye ndị ahịa ya ngwaahịa nke kachasị mma. Absolutely ga-agbaghara a counter.
Kporie mmanya mmanya Bordeaux otu ị chọrọ
Bordeaux Wines, ndị bụ isi ndị mmekọ maka ememme a, esonyeghachiri anyị na njem mmemme a. Ememme a bụ ohere pụrụ iche iji chọpụta àgwà nke mmanya Bordeaux ma zute gburugburu 50 ndị na-eme mmanya mmanya na Bordeaux bụ ndị ga-ekerịta agụụ ha n'ụzọ enyi na izu ike.
Gbanwee akụkọ na akụkọ banyere ndị nwoke na ndị nwanyị a na-eme mmanya nke Bordeaux. A na-eme mmanya ndị a dị mfe, nke dị mfe ị drinkụ, site na iji nlezianya na-agwakọta ọtụtụ ụdị mkpụrụ vaịn ma na-atọ ndị ọbịa ụtọ. Nke a bụ ohere pụrụ iche ịchọpụta ọhụụ ọhụrụ Bordeaux na-acha uhie uhie, ọcha ọcha, rosés, clairets na sweets, nke na-eme ka ihe atụ magburu onwe ya wee soro ụdị nri niile. A ga-emekwa ka mmanya abụọ e jikọtara ọnụ maka mmemme ahụ maka nri ndị siri nri, ọzara na efere efere n’oge ememme ahụ.
Ọhụụ, Ike, Ego: The Africa Tourism Recovery ...